Thit Htoo Lwin: 5/1/11 - 5/8/11
16/06/13 - 23/06/13 (141)
ပျဉ်းမနားမြို့သကြားစက်ရုံက ၀န်ထမ်းတွေ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြံစိုက်ခင်းတွေအတွက် အဓမ္မခိုင်းစေခံနေရ။
ကျွန်တော်က ပျဉ်းမနားမြို့အရှေ့ဘက် အမှတ် (၃) သကြားစက်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးပါ။
5/11/2011 07:03:00 PM
Top UN envoy to visit Myanmar
Wednesday, 11 May 2011 03:04
YANGON: A top UN envoy left for Myanmar yesterday to hold the first talks there since the dissolution of the junta and the appointment ofanominally civilian government, UN sources said.Vijay Nambiar, chief of သစ်ထူးလွင်
5/11/2011 08:10:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၁-မေ-၂၀၁၁)
ပြည်တွင်းမှ ခရီးသွားနှင့် ပြည်ပခရီးသည်များ အတွက် သံရုံးအသီးသီးမှ ဗီဇာရရှိမှုပိုင်းတွင် ကြန့်ကြာမှုများရှိ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက်သံရုံးများ၏ ဗီဇာတင်းကျပ်မှုသည်လည်း အဓိကအချက်ဖြစ်(နှိပ်ရန်)
ယူအေအီးမှ မြန်မာအလုပ်သမား ခေါ်ယူမှု ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး မြင့်တက် မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက် ပေးခြင်းထက် မက်လုံးပေး ခေါ်ယူနေသည့် အေးဂျင့်အချို့ကြောင့် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များနှင့် လွဲချော်မှု ပြဿနာများ ရှိလာ(နှိပ်ရန်)
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းသစ်ဖွင့်လှစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ အကြား သဘောတူညီမှုရရှိ (နှိပ်ရန်)
လေဆိပ်ခွန် (Airport Tax) နှုန်းထားအား တိုးမြှင့်၍ လေယာဉ်လက်မှတ်များတွင် တစ်ပါတည်း ကောက်ခံမည့် စနစ်ကို DCA မှ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါက စတင်ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရ(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးမိသားစုဝင် ပညာရေးထောက်ပံ့ (နှိပ်ရန်)
ဟူးကောင်းဒေသ ရေနံရှာဖွေမှု ကချင်အဖွဲ့ ကန့်ကွက်(နှိပ်ရန်)
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတည်ငွေလှူ(နှိပ်ရန်)
စာရေးဆရာ နတ်နွယ် ကွယ်လွန် (နှိပ်ရန်)
အစိုးရကို မထိခိုက်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ရေးနိုင် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ကျေးရွာများ ရေအခက်အခဲဖြစ်နေ (နှိပ်ရန်)
ဂီရိ ဒဏ်သင့် ကျေးရွာတချို့ ကချင်ကို ရွှေ့ (နှိပ်ရန်)
မူးယစ်နှင့်ပတ်သက်သူ လက်နက်နှင့်အတူ အဖမ်းခံရ (နှိပ်ရန်)
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တပ်ရင်းမှူးအပါအဝင် ၁၀ ယောက်ခန့်သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
5/11/2011 08:07:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (11 မေ 2011)
အောက်တိုဘာတွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (၇) ဘီလီယံ ရှိပြီး၊ ၂၁၀၀ ခုနှစ်တွင် (၁၀) ဘီလီယံ ရှိမည် (နှိပ်ရန်)
5/11/2011 08:06:00 AM
Myanmar News Now: 11 May 2011
Oil drilling to begin in Burma’s eco-sensitive Hukaung Valley (Click)
Burma party to ‘robust’ bear trade(Click)
U.N. aide visiting Myanmar today(Click0
UN aide visits Myanmar to meet new government leaders(Click)
Top UN official visits Myanmar (Click)
ASEAN in Quandary over Burma's Request to Head Bloc(Click)
Water transport protocol with Myanmar soon(Click)
5/11/2011 07:54:00 AM
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒဿမအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ၏ သားသမီးများ အတတ်ပညာရေး ထောက်ပံငွေ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား(သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ)
5/11/2011 12:20:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၀-မေ-၂၀၁၁)
သူ၏ စတူဒီယိုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည
(ဓာတ်ပုံ - ဂျင်မက်နားလစ်စ်)
မြန်မာကို လေ့လာဖို့ အာဆီယံပြင်ဆင်(နှိပ်ရန်)
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အာဆီယံ ဥက္ကဌနေရာ အပ်နှင်းရေး(နှိပ်ရန်)
အင်းလေလံ လုပ်ငန်း အဂတိလိုက်စားမှု လယ်သမားများ အထူးနစ်နာ(နှိပ်ရန်)
အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်း ဖွင့်မရအောင် ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေ ဖိအားပေး(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကလေးများကို ပညာရေး အထောက်အပံ့ ပေးအပ်(နှိပ်ရန်)
ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလည် ယခုရက်ပိုင်း မြန်မာပြည် သွားမည်(နှိပ်ရန်)
ငလျင် အပြင်းအထန်စတင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့်နေ့၌ ပြိုကျပျက်စီးသော အိမ်များကိုသာ အာဏာပိုင်တို့ ကူညီထောက်ပံ့ (နှိပ်ရန်)
SSPP/SSA နယ်မြေ ဘုန်းတော်ကြီးများ အသွားအလာ မြန်မာစစ်တပ်တင်းကြပ် (နှိပ်ရန်)
တာချီလိတ် ခရိုင်ရဲစခန်း အနီး ဗမာအမျိုးသမီး ပစ်သတ်ခံရ (နှိပ်ရန်)
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပထမဆုံး တိုင်ကြားသည့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမှု စတင် စစ်ဆေး (နှိပ်ရန်)
တမျိုးသားလုံးကို အခြေခံသည့် ပေါ်လစီဖြစ်ရန် ကျားဖြူပါတီ ပြန်လည်ပြုပြင်မည် (နှိပ်ရန်)
ထိုင်းဖက်ခြမ်း ဒေသခံများ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ကျောက်မီးသွေး သယ်ရေး စရာဘူးရီးကုမ္ပဏီ အခက်တွေ့ (နှိပ်ရန်)
မွန်ပြည်နယ် မိုးသက်လေပြင်းကျ၊ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ် (နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းကို ခင်ဗျားလည်း တွေးဖို့ကောင်းတယ် (နှိပ်ရန်)
မြစ်ဆုံ ပြောင်းရွှေ့ရွာသားများ လျော်ကြေးအပြည့် မရသေး(နှိပ်ရန်)
အခြေခံဥပဒေကို လွှတ်တော်တွင်းမှ တိုက်ဖို့ တစည ပြင်(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များ အလုပ်သမား စာရင်းတင်ခွင့်ပြုပြီ (နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ နမ်ဘီးယားနှင့်ဆွေးနွေးမည် (နှိပ်ရန်)
ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် မြန်မာပြည် လာမည် (နှိပ်ရန်)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်ပြင်တွင် မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိ (နှိပ်ရန်)
အမေရိကန် သံအရာရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ (နှိပ်ရန်)
ကုလ အထူးကိုယ်စား မြန်မာပြည် လာမည်(နှိပ်ရန်)
အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များ ပညာရေးအတွက် NLD ထောက်ပံ့(နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ပထမဆုံး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်(နှိပ်ရန်)
ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ယခုသီတင်းပတ် မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်မည်(နှိပ်ရန်)
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်အချို့တွင် မေလ ၇ ရက်နေ့က ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပွားခဲ့(နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်တွင် ဧပြီလအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှု ၁၂၄ မှုအထိ ဖြစ်ပွားပြီး စံချိန်တင် ပမာဏဖြစ်ခဲ့(နှိပ်ရန်)
မြန်မာတိုင်းစ်နှင့် မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးမည်(နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန် တဝှမ်း ခိုးကူးခွေဆိုင်များ ပိတ်ထား (နှိပ်ရန်)
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ယာယီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးရွှေမန်း တာဝန်ယူ(နှိပ်ရန်)
ကျားဖြူစီးပွားရေး မလေးရှားကုန် တင်သွင်း (နှိပ်ရန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်တုကို ထုလုပ်ခြင်း (နှိပ်ရန်)
လေဘေးသင့် ဒေသတချို့ ဆန်ပြတ်လပ်နေ (နှိပ်ရန်)
ဂတ်စ်ကို နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းပြီး ဖွဲခွံဓါတ်ငွေ့ဖြင့် မီးပေးမည့် အစီအစဉ် စစ်တွေမြို့သားများ လက်ခံမည်မဟုတ် (နှိပ်ရန်)
ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ရာတွင် ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ကျောက်ဆောင်များကို ဖြိုချနေသဖြင့် ရေနေသတ္တ၀ါများ သေဆုံးနေ(နှိပ်ရန်)
NLD ရုံးချုပ်တွင် ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပမည် (နှိပ်ရန်)
ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးရရှိရေး ကြံ့ဖွံ့လာဘ်ပေး (နှိပ်ရန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ ဂုဏ်ပြုဈေးရောင်းပွဲ ကျင်းပမည် (နှိပ်ရန်)
စာရေးဆရာ ဝေမှူးသွင်ကို ဖမ်းဆီး(နှိပ်ရန်)
၆​၄ နှစ်​ရှိ​ပြီ ပြည်​တွင်း ငြိမ်း​ချမ်​ရေး မ​ရ​သေး(နှိပ်ရန်)
5/10/2011 05:04:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (10 မေ 2011)
ကုလသမဂ္ဂ လူမှု ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး အရာရှိ Valerie Amos
ဂျပန်က နျူကလီးယား စွမ်းအင်အစီအစဉ် ပြန်စဖို့လုပ်(နှိပ်ရန်)
တရုတ်ကုန်သွယ်ရေး လိုငွေပြရာက တဟုန်ထိုး အမြတ်ထွက်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် ဇနီး ၃ ဦးကို အမေရိကန်က စစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့် ရမည်(နှိပ်ရန်)
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းဖို့ ၀န်ကြီးချုပ် ၂ ပါး မျက်နှာချင်းမဆိုင်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်ကိစ္စ စွပ်စွဲချက် ပါကစ္စတန် ပယ်ချ(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန်၊ တရုတ် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဆွေးနွေး(နှိပ်ရန်)
စင်ကာပူ အစိုးရ လူထုထောက်ခံမှု ကျဆင်း(နှိပ်ရန်)
လစ်ဗျားမှာ အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲကြဖို့ ကုလ အကြီးအကဲ ပန်ကြား(နှိပ်ရန်)
5/10/2011 04:28:00 PM
Myanmar News Now: 10 May 2011
AFP/File – Top UN envoy, Vijay Nambiar (pictured), will visit Myanmar this week for the first time since the dissolution … UN envoy to hold talks with Myanmar leaders, opposition(Click)
Senior UN official heads to Myanmar for talks with top officials(Click)
Chiang Rai shaken by Burma quake(Click)
UN special envoy to visit Myanmar to meet new government, pro-democracy leader Suu Kyi(Click)
UN aide to visit Myanmar, meet with new government (Click)
Top UN official to visit Burma(Click)
Canada Urges Accreditation of Burma Ambassador(Click)
Top UN official to visit Myanmar
Sailor Dies From Suffocation In A Chemical Ship Tank(Click)
Myanmar president's Indonesia visit further strengthens bilateral relations (Click)
5/10/2011 04:17:00 PM
Yangon - United Nations special envoy to Myanmar Vijay Nambiar is to visit the country this week,agovernment official said Tuesday. 'Nambiar will visit here on Thursday,' an official who requested anonymity told the German Press Agency dpa. 'He will stay in Myanmar for three or four days and is scheduled to meet both government and opposition figures.' Nambiar is expected to meet Myanmar's new president, Thein Sein, and opposition leader Aung San Suu Kyi, according to the official. It would be Nambiar's first meeting with Suu Kyi, who
5/10/2011 08:30:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအချို့တွင် နှစ်စဉ်ကထက်ပိုသော မိုးကြိုမိုး ရွာသွန်းမှုများဖြစ်ပေါ်
ELEVEN ဂျာနယ် Monday, 09 May 2011 09:41 မေလ ၆ ရက်နေ့က မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းတစ်နေရာ ရေလျှံနေမှုကိုတွေ့ရစဉ်မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အချို့တွင် နှစ်စဉ်ကထက် ပိုသော မိုးကြိုမိုးရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သတင်းရ ရှိပါသည်။
“ဒီမိုးက မုန်တိုင်းမိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မိုးကြိုမိုးပါ။ ဒါပေမယ့် မိုးကြိုမိုးရွာတဲ့ပုံစံကတော့ ဒီနှစ် သစ်ထူးလွင်
5/09/2011 11:38:00 AM
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်မြောက်ရေး ရခိုင်တွင် လက်မှတ် ၅၀၀၀ ကျော် စုဆောင်း ရရှိ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်သား လွှတ်မြောက်ရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မြို့နယ် ခုနှစ်မြို့နယ်တွင် လက်မှတ်ရေထိုးမူကို စတင်ဆောင်ရွက်နေရာ ယခုအခါ လက်မှတ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပါတီ တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
အဆိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးမူကို စစ်တွေ၊ ရသေ့တောင်၊ တောင်ကုတ်၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ သံတွဲနှင့် ဂွမြို့နယ် သစ်ထူးလွင်
5/09/2011 11:26:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၉-မေ-၂၀၁၁)
ရန်ကုန်က လက်လုပ်လက်စားတို့ရဲ့ မြင်ကွင်း
UNFC က အမြန်ဆုံး ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လို(နှိပ်ရန်)
ကေအန်ယူ နဲ့ မြန်မာတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်(နှိပ်ရန်)
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသစ်၏ ရေလုပ်ငန်း လေလံဈေး ၃ ဆမြင့်တက် (နှိပ်ရန်)
မိခင်ဘာသာစာပေ သင်ကြားရေးစနစ် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပူးပေါင်း တောင်းဆိုမည်(နှိပ်ရန်)
ဦးသိန်းညွန့်အမှု တိုင်းကော်မရှင်ထံ NDF အပြီးတင် (နှိပ်ရန်)
ဦးအောင်သိန်းလင်း ငွေကြေးအလွဲသုံးစာမှုဖြင့် မေးမြန်းရန် ဆင့်ခေါ်ခံရ (နှိပ်ရန်)
မြန်မာ အာဆီယံ ဥက္ကဌ ဖြစ်ရေး စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိ (နှိပ်ရန်)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်တွင်းအပြောင်းအလဲ စတင်လုပ်ဆောင် (နှိပ်ရန်)
ကော့ကရိတ် တိုက်ပွဲများတွင် နှစ်ဘက် ထိခိုက်သေကျေမှုရှိ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ အတိုက်အခံများ ချင်းမိုင်၌ ကန့်သတ်ခံရ (နှိပ်ရန်)
ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ရာထူးအခေါ် ပြောင်းပေမဲ့ အများစု လူမပြောင်း(နှိပ်ရန်)
အီဂျစ် မြန်မာသံရုံးက အကူအညီမပေး(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန် သံရုံးတာဝန်ခံ မကွေးတိုင်း NLD ၊ NDF ပါတီများနှင့်တွေ့ဆုံ (နှိပ်ရန်)
နော်ဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်းဆွေးနွေး(နှိပ်ရန်)
မြန်မာအစိုးရ တောင်းဆိုချက် အာဆီယံ စဉ်းစား(နှိပ်ရန်)
လန်ဒန် မာရသွန် ပြေးလမ်းတလျှောက် ကခုန်ခဲ့သူ (နှိပ်ရန်)
၁ဝ ရက်အတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်(နှိ်ပ်ရန်)
မိုးများသဖြင့် ပုဂံညောင်ဦး စိုက်ခင်းပျက်(နှိပ်ရန်)
သြစတြီးယားကုမ္ပဏီ စစ်လက်နက် ကြော်ငြာမှု NLD အတွက် အနှောင့်အယှက် (နှိပ်ရန်)
စာရေးဆရာ ဝေမှူးသွင် မူးယစ်မှုဖြင့် ဖမ်းခံရ(နှိပ်ရန်)
မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် ကန်ထရိုက်တချို့ပယ်ဖျက်ရန် ရခိုင်ပါတီ ပန်ကြား(နှိပ်ရန်)
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဦးရွှေအုံး ၏ ကိုယ်ရေး အထ္ထုပတ္တိစာအုပ်ထွက်ပြီ(နှိပ်ရန်)
ယာလုပ်စားခွင့်ပေးရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကိုတောင်းဆို(နှိပ်ရန်)
လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် ပင်လယ်တွင်း မျောပါပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် ရေလုပ်သားများ၏ မိသားစုအချို့မှ လုပ်ငန်းရှင်များထံတွင် လျော်ကြေးတောင်းမှုများ ရှိနေ(နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန်က လက်လုပ်လက်စားတို့ရဲ့ မြင်ကွင်း-ဓါတ်ပုံများ(နှိပ်ရန်)
၂ဝ၁၄ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ(နှိပ်ရန်)
ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်နေသ၍ အာစီယံဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ တာဝန်ယူရေး ကန့်ကွက်ဖို့မရှိ(နှိပ်ရန်)
5/09/2011 11:20:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (09 မေ 2011)
မုန်တိုင်းကြောင့် မြို့တော် မနီလာ အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ အဝေးပြေးလမ်းမတခုတွင် ရေကြီးနေစဉ်။ မေ ၈၊ ၂၀၁၁။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ထိုင်းလွှတ်တော် ဖျက်သိမ်း(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်နှစ်ရှည်ခိုအောင်းခဲ့မှု ပါကစ္စတန် စုံစမ်းမည်(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယားဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်က ပိတ်ဆို့(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်ရဲ့ အဆက်အသွယ်ကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ပန်ကြား(နှိပ်ရန်)
ဖိလစ်ပိုင်မုန်တိုင်း ၉ ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်ကို ပါကစ္စတန်မှာ ကူညီသူရှိလို့ သမ္မတ အိုဘားမား ပြော(နှိပ်ရန်)
5/09/2011 11:04:00 AM
ASEAN considers Myanmar chairmanship (Video)
Reuters.co.uk 13:29 Sun, 08 May 2011
5/09/2011 09:04:00 AM
Myanmar News Now:9May 2011
Burma Conference Banned From Chiang Mai(Click)
MPs urge ASEAN to suspend Burma(Click)
Lt Tul Bahadur Pun VC: Rifleman decorated for his bravery in Burma(Click)
Asean open to giving Myanmar chairmanship(Click)
Myanmar junta cannot lead Asean(Click)
ASEAN considers giving Myanmar chairmanship in 2014(Click)
ASEAN open to giving Myanmar chairmanship in 2014(Click)
Myanmar to chair Asean despite rights record (Click)
5/09/2011 07:51:00 AM
The Voice ဂျာနယ် မေလ ဒုတိယပတ်
The Voice May 2nd Week
5/08/2011 08:24:00 PM
Yan Win (Taung Da Gar) – Myanmar Palway
ပလွေတို ရောင်မှာထိုးပါလို့ရန်ဝင်း (တောင်တံခါး)မေ ၈၊ ၂၀၁၁မြန်မာ့ရိုးရာမှာ ‘ပလွေ’ ဆိုတာ ကျေးလက်က ရောင်ပေစူးနဲ့ နွားကျောင်းသားတွေအတွက် အင်မတန် အသုံးတွင်ကျယ်တဲ့ တူရိယာပါပဲ။ ဝါးပလွေတလက်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်လုပ်၊ သစ်ထူးလွင်
5/08/2011 08:02:00 PM
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ....
စနစ်တွေပြောင်း။ လူတွေပြောင်းတော့ အဟုတ်ကြီးထင်လို့ အားကိုးရှာသည် မူတွေမပြာင်းသေးပါလား?
ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးက ပြည်သူ့ အကျိုးကို မကြည့်ပဲ ခင်ဗျားတို့ ဆရာဝန်အချင်းချင်း အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ပြန်ကြည့်နေတာလား ?
5/08/2011 01:34:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၈-မေ-၂၀၁၁)
များမကြာမှီက ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးကြောင့် ရန်ကုန်- စစ်တွေ ကားလမ်း ရခိုင်ဘက်ခြမ်းတွင် ဤသို့ ဖြစ်ပျက်နေသည်။ (ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
အာဆီယံဥက္ကဌ မြန်မာရဖို့ မဆုံးဖြတ်ရသေး (နှိပ်ရန်)
ရခိုင်ပြည်နယ် ငါးဖမ်းလုပ်ကွက် ငှားရမ်းမှာကို ကန့်ကွက်(နှိပ်ရန်)
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ EU စိတ်မဝင်စား(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ နေရာအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ သဘောထားကွဲ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင် အာဆီယံအပေါ် ယုံကြည်မှု လျော့ပါးနိုင်(နှိပ်ရန်)
ကိုဝေမှူးသွင် ကို ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ခေါ်ဆောင်သွား(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တရုတ်နယ်စပ်တွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှု တိုးလာ(နှိပ်ရန်)
နေရပ် ပို့ခံရမည်ကို ဒုက္ခသည်များ စိုးရိမ် (နှိပ်ရန်)
ရခိုင်ဘက်ခြမ်းတွင် ကားလမ်းပျက်စီးနေ၍ ရန်ကုန်- စစ်တွေ ခရီးသွားခြင်း အန္တရာယ်များ(နှိပ်ရန်)
CDMA 450 နှင့် 800 MHz ဖုန်းချပေးမှု အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်း (နှိပ်ရန်)
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း အစိုးရ ၀န်ထမ်းများ အသတ်ခံရ (နှိပ်ရန်)
Dunkley တရားလို နေမကောင်း အမှု ကြာနိုင်(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေး အာဆီယံ မူအားဖြင့် သဘောတ(နှိပ်ရန်)
5/08/2011 12:59:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (08 မေ 2011)
အီဂျစ် ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်သူတွေ စစ်ခုံရုံးတက်ရမယ်(နှိပ်ရန်)
အီဂျစ် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း လှုံ့ဆော်သူတွေကို အရေးယူဖို့ စီစဉ်ပြီ(နှိပ်ရန်)
ထိန်းချုပ်ထားသည့် လစ်ဗျားပိုင်ဆိုင်မှု အချို့အား တိုက်ခိုက်ရေး သမားများကို လွှဲပေးရန် အမေရိကန် ဆန္ဒရှိ(နှိပ်ရန်)
လစ်ဗျားသူပုန်ကို အီတလီက လက်နက်ထောက်ပံ့မည်(နှိပ်ရန်)
ပါကစ္စတန် ခေါင်းဆောင်များ နှုတ်ထွက်ရန် ဖိအားပေးခံရ(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် ကိစ္စ ပါကစ္စတန် အစိုးရ ဖိအားပေးခံရ(နှိပ်ရန်)
5/08/2011 12:43:00 PM
Myanmar News Now: 8 May 2011
Welcoming party: Dancers arrive at the Jakarta Convention Center in Jakarta on Saturday. They came from Surabaya, East Java to perform at the official dinner for ASEAN leaders. JP/Ricky Yudhistira
Myanmar likely to host ASEAN summit in 2014(Click)
Myanmar could lead ASEAN in 2014(Click)
Myanmar set to take over ASEAN chair in 2014 despite doubts over human rights record(Click)
5/08/2011 12:29:00 PM
ဗိုလ်မှူး ဘသော် (ခ) မောင်သော်က
မောင်သော်က ပြောသောပုံပြင်များ အစီအစဉ်ကို အပါတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအပါတ်မှာတော့ တနယ်သားလူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အပါတ်မှာတော့ တန်းစီခြင်းအစ နေ၀င်းက အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင်တွေပြောခဲ့တဲ့ ဆရာမောင်သော်က အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ------------
စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ မောင်သော်က (ခေါ်) ဗိုလ်မှူး ဘသော် (၁၉၂၈ - ၁၉၉၁) ၁၉၂၈ ခုနှစ်၊ ရွှေဘိုမြို့တွင် အဖ ဦးမှန်ကြီး၊ အမိ ဒေါ်မြိုင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။ သားသမီး ၄ ယောက် အနက် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်တွင်ပင် သစ်ထူးလွင်
5/08/2011 06:33:00 AM
မောင်သော်က ပြောတဲ့ ပုံပြင်များ(၁)
စာရေးဆရာ အယ်ဒီတာ မောင်သော်က
စစ်အကျဉ်းထောင်မှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ အယ်ဒီတာ မောင်သော်က ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်များ ဖတ်ကြားတင်ဆက်မှု အပိုင်း ၁ အသံဖိုင် နားဆင်ရန် ကိုဂျေ တင်ဆက်ထားတာပါ
ပုံပြင်တွေအကြောင်း မပြောခင်မှာ ပုံပြင်တွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဆရာမောင်သော်ကအကြောင်း အနည်းအကျဉ်း ပြောပြချင်ပါတယ်၊ ဆရာမောင်သော်ကဟာ သစ်ထူးလွင်
5/08/2011 06:18:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၇-မေ-၂၀၁၁)
မြန်မာ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေး အာဆီယံ မူအားဖြင့် သဘောတူ(နှိပ်ရန်)
ဗြိတိန်အနုပညာပွဲတော်အတွက် ဒေါ်စု သတင်းစကား(နှိပ်ရန်)
မြန်မာကို အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးရေး အာဆီယံ စဉ်းစားနေ(နှိပ်ရန်)
ဂျော်ဒန်ရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ(နှိပ်ရန်)
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ မြန်မာကို မပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
ပဲခူး NLD ကျန်းမာရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ နွမ်းပါးသူများကို အခမဲ့ ကုသပေး(နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှ ချင်းမိသားစု ၄ဝ ကျော် နှင်ထုတ်ခံရ(နှိပ်ရန်)
အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန် မြန်မာ အဆိုပြုချက် စင်ကာပူ ကန့်ကွက်(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေတွေမှာ အရောင်းခံရတဲ့ မြန်မာ ရေလုပ်သားတွေ (နှိပ်ရန်)
မြန်မာ ဂတ်စ် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ တင်ပို့ရေး စတင် ဆွေးနွေး(နှိပ်ရန်)
5/07/2011 11:14:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (07 မေ 2011)
ကန်ဒါဟာနယ် အစိုးရရုံး တာလီဘန် ၀င်တိုက်(Click)
အမေရိကန်တပ်တွေကို အာဖဂန်ကနေ ပြန်ခေါ်မလား(နှိပ်ရန်)
အိုင်ဗရီကို့စ် သမ္မတသစ် ၀ါတာရာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်(နှိပ်ရန်)
အယ်လ်ခိုင်းဒါး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ကျဆုံးတော့မည်(နှိပ်ရန်)
5/07/2011 11:08:00 AM
Myanmar News Now:7May 2011
Thai-Cambodia row, Myanmar concerns EU companies (Click)
EU to negotiate FTA with all ASEAN countries, except Myanmar(Click)
Burma’s New President Is No Moderate(Click)
People’s Forum urges Asean not to appoint Burma Asean chair (Click)
Karen Refugees Sent Back to Burma(Click)
ASEAN mulls giving Burma chair(Click)
ASEAN must thoughtfully handle Burma's proposal for chair(Click)
Burma eyes chairmanship(Click)
Myanmar row, Thai-Cambodia spat cloud ASEAN summit(Click)
Asean plans giving chair to Myanmar Saturday, 07 May 2011 00:17(Click)
5/07/2011 06:34:00 AM
ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသစ်တွေ ရွေးချယ်
နေပြည်တော် လယ်ဝေး၊ ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကုန်း နဲ့ သီရိငါးမြို့နယ်မှာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်တွေ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသစ်ရွေးချယ်ဖို့ အတွက် မူတွေကိုလည်း အထက် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေက ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ ပေါ်ထွန်းလာပြီ ဆိုပေမယ့် ၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့သူကို သစ်ထူးလွင်
5/07/2011 05:46:00 AM
170411 HAK Trip to Southern
5/06/2011 06:34:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၆-မေ-၂၀၁၁)
၂၀၀၄ မှာ မြန်မာ အာစီယံဥက္ကဌဖြစ်လာမှာလား(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ မဖြစ်သင့်သေးဟု CRPP ယူဆ(နှိပ်ရန်)
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မြန်မာသမ္မတတို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးဆွေးနွေး(နှိပ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အမေရိကန်ရောက် တိုင်းရင်းသားများ ပို့စကတ်ပို့မည်(နှိပ်ရန်)
ကမ္မမြို့မှ မြေသိမ်းခံ လယ်သမားအမှု မင်းလှတရားရုံးသို့ ပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေး(နှိပ်ရန်)
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ စာတမ်းဖတ်ပွဲ CRPP ကျင်းပမည်(နှိပ်ရန်)
ဆန္ဒပြ မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ဦးကို မလေးရှားရဲ ဖမ်းဆီး(နှိပ်ရန်)
လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှိုးဆော်(နှိပ်ရန်)
အာဆီယံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်မည် (နှိပ်ရန်)
ဝက်နားရွက်ပြာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲနေ (နှိပ်ရန်)
ွံတွံတေးမြို့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုဇော်မင်းထွန်း လွတ်မြောက်(နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယ မြန်မာ့ရေးဆွေးနွေးပွဲ မြန်မာအစိုးသစ်ကိုလက်မခံ(နှိပ်ရန်)
၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံအတွက် ပညာရှင်စာတမ်းများ စီအာပီပီ ဖိတ်ခေါ်(နှိပ်ရန်)
ဂိရီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိုယ်ကျိုးရှာမှု့များရှိလာ(နှိပ်ရန်)
ပြင်ဦးလွင်မြို့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပထမ လေးလတာ ကာလအတွင်း အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှုမှာ ယမန်နှစ် လေးလတာ ကာလထက် သုံးဆခန့် မြင့်တက်လာ(နှိပ်ရန်)
အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ် စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်း ဘဏ်စနစ်နှင့်အတူ အေတီအမ် ကတ်စနစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဘဏ်များနှင့် အိုင်တီကုမ္ပဏီများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လာ(နှိပ်ရန်)
မီးရထားပေါ်တွင် လပ်တော့ ကွန်ပျူတာ၊ ကက်ဆက်အသေး၊ ဗီဒီယိုကင်မရာအသေး စသည့် ခရီးသည်နှင့် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်သွားနိုင်သည့် ပစ္စည်းများအတွက် တန်ဆာခ ပေးဆောင်ရန်မလိုတော့(နှိပ်ရန်)
ရထားပေါ် လက်တော့ပ်သယ်ရင် တန်ဆာခ မလိုတော့(နှိပ်ရန်)
ပြည်တော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ မြန်မာလုပ်သား နှစ်ဦးကို မလေးရဲ ဖမ်းဆီး (နှိပ်ရန်)
စာနယ်ဇင်းသမားများ ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း ပြုလုပ် (နှိပ်ရန်)
ထိုင်းက စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ကျော် ပြန်ပို့ (နှိပ်ရန်)
အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်များ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မျှော်လင့် (နှိပ်ရန်)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ တွေ့ဆုံ (နှိပ်ရန်)
ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ မျှော်လင့်ချက်နည်း (နှိပ်ရန်)
ခိုးကားများ ထိုင်းဘက် ပြန်ပို့ (နှိပ်ရန်)
သီန္ဒီ-လားရှိုး စစ်တပ်တိုင်း ဒုလ္လဘမ၀တ်မနေရအမိန့်ကျ(နှိပ်ရန်)
၀ နယ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိ ရှမ်းတပ်များအားတိုက်ခိုက်ရန် ဌာနေတပ်များ ထပ်ဆင့်ခေါ်(နှိပ်ရန်)
5/06/2011 06:19:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (06 မေ 2011)
မ္မတ အိုဘားမား Ground Zero တွင် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချနေစဉ်။ မေ ၅၊ ၂၀၁၁။
ဘင်လာဒင် သေဆုံးမှု အယ်လ်ခိုင်းဒါး အတည်ပြု(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ စောစောကျင်းပရန် လွှတ်တော်ကို ဖျက်မည်(နှိပ်ရန်)
ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆိုသည့် ဆရာ အစည်းအရုံးကို ဖိနှိပ်မှုအပေါ် EI မှ ကန့်ကွက် (နှိပ်ရန်)
9-11 ၁၀ နှစ်ပြည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရေး ဘင်လာဒင် ကြံစည်ခဲ့(နှိပ်ရန်)
အိုဘားမား နယူးယောက်ခ် Ground Zero မှာ လွမ်းသူ့ပန်းခွေချ(နှိပ်ရန်)
သေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက် အိုဘားမား ပန်းခွေချ(နှိပ်ရန်)
5/06/2011 05:45:00 PM
Myanmar News Now:6May 2011
SBY, Burma Head Call for Stronger Relations(Click)
Burma: ASEAN should reject Burma's request to chair the regional grouping in 2014(Click)
Human Rights Watch Urges Asean to Reject Burma's Request to Chair Bloc(Click)
Burma 'keen' to chair ASEAN(Click)
ASEAN: Reject Burma as Regional Group’s Chair(Click)
Myanmar endeavors for promotion of development of traditional medicine(Click)
Myanmar wants RI to back ASEAN chair bid(Click)
Refused to fly over Myanmar, Ethiopian plane lands in Kolkata(Click)
New Orleans Jazz Fest vendor runs philanthropic activities in Myanmar (Click)
Asean not easily swayed by Burma's bid for chair(Click)
Asean discusses Burma chairmanship(Click)
Talks on with Myanmar to import gas (Click)
RI, Myanmar eye trade volume to reach $500m in 2015(Click)
Broadcaster urges Myanmar to free 17 journalists(Click)
Myanmar president in Indonesia for state visit(Click)
5/06/2011 06:19:00 AM
ဒေါ်စုလှုပ်ရှားမှု စောင့်ကြည့်ရမည်ဟု သျှမ်းမြောက် ရောက် ကြံ့ဖွံ့ထိပ်သီး ဦးအောင်သောင်းပြော
ကြံ့ ဖွံ့ အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်သောင်း
Thursday, 05 May 2011 18:57 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်း ဒေါ်စုလှုပ်ရှားမှုမှာ ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရသစ် အဖို့ ထိခိုက် နစ်နာစေမှုမရှိသေးသော် လည်း သူမအား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း လားရှိုး ရောက် ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွင်းရေး မှူး ဦးအောင်သောင်း က ပြောခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
5/06/2011 06:01:00 AM
စစ်တွေ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အချိန်မီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိရာမှ ရခိုင်အဆိုတော် ဒိုးအ်ရီ ဇနီး သေဆုံးရခြင်းဖြစ်
ရခိုင်အဆိုတော်ဒိုးအ်ရီဇနီး မဥမ္မာထွန်း(၃၂)နှစ် အား ၁၇-၆-၂၀၁၃ နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် စစ်တွေမြို့၊ ရူပမြောက်ရပ်ကွက်ရှိ ၄င်းတို့၏ အိမ်အနီးတွင် ...